दुब्लो भएकोमा चिन्तित हुनुहुन्छ ? यसरी मोटाउन सकिन्छ - Sawal Nepal
दुब्लो भएकोमा चिन्तित हुनुहुन्छ ? यसरी मोटाउन सकिन्छ
काठमाडाैं सवाल नेपाल २०७७ कार्तिक १७, १५:३३
कतिपय मानिसलाई धेरै मोटो भएका कारण दुब्लाउन मन लागेको हुन्छ भने कतिपयलाई धेरै दुब्लो भएका कारण मोटाउन मन लागेको हुन्छ ।
अझ कति मानिसको शरीर त जति खाए पनि नमोटाउने हुन्छ । मान्छले मोटाउनका लागि प्रयास गर्छन्, चिन्तित हुन्छन् । तर, मोटाउन सक्दैनन् ।
तर, केही खानेकुराले भने मान्छेलाई मोटाउन सहयोग गर्छ । आउनुस् यसबारेमा जानौंः
तपाईं निकै दुब्लो हुनुहुन्छ र मोटाउन चाहनुहुन्छ भने केरा खाने गर्नुस् । केरामा हुने पौष्टिक तत्वले तपाईंलाई फाइदा त गर्छ नै । योसँगै यसमा पाइने काब्र्स र क्यालोरीले तपाईंलाई मोटाउन सहयोग पुग्छ । अझ केरा र दही खाँदा स्वास्थ्यका लागि लाभदायक हुन्छ ।
आँप मान्छेले यसको स्वादका लागि खाने गर्छन् । यसमा पोषक तत्व भरिपूर्ण मात्रामा पाइन्छ । केरामा जस्तै आँपमा पनि क्यालोरी पाइन्छ । साथै आँपमा भिटामिन सी, बी, ए र ई पाइन्छ भने प्रोटिन, फ्याट, कार्ब्स र फाइबर पनि पाइन्छ ।
ड्राइ फुड खाँदा स्वास्थ्यलाई राहत पुग्छ । यस्ता फुडमा शरीरलाई शक्ति दिने तत्व हुन्छ । अझ ड्राइ फुडमा बदाम, काजु, किसमिस मिसाउँदा झन् फाइदाजनक हुन्छ ।
एभोकार्डोका बारेमा त तपाईंले सुन्नुभएकै होला । यसमा क्यालोरी र फ्याटको मात्रा बढी हुन्छ । साथै यसमा क्यालोरी, प्रोटिन, भिटामिन सी लगायतका तत्व पनि पाइन्छ । यसको नियमित सेवनले पनि मोटोपन बढाउन सहयोग पुग्छ ।